सिन्धुपाल्चोकमा ३ पटक भूकम्पको धक्का, स्थानीय पानीमा भिज्दै घरबाहिर ! « MNTVONLINE.COM
सिन्धुपाल्चोकमा ३ पटक भूकम्पको धक्का, स्थानीय पानीमा भिज्दै घरबाहिर !
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकमा ३ पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । आज गएको भूकम्पको केन्द्र सिन्धुपाल्चोकको राम्चे हो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३ पटक भूकम्पको धक्का महसुस भएको स्थानियवासीहरुले बताएका छन् । तर राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको मापनमा भने विहान ५ बजेर १९ मिनेटमा ६ रेक्टर स्केलको एउटा मात्र भूकम्प गएको देखिएको छ ।
चार रेक्टर भन्दा कम मापनका भूकम्पको रेकर्ड मापन केन्द्रमा नहुने हुँदा यस्तो देखिएको हो । यद्यपी आज गएको भूकम्प नयाँ भूकम्प नभएको र ०७२ कै भूकम्पको पराकम्प भएको मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
बुधबार बिहान आएको भूकम्पको कारण मानिसहरू सुरक्षाका लागि भन्दै घरबाहिर निस्किएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेका अनुसार बाह्रबिसेका स्थानीय डरले घरबाहिर निस्केर बसेका छन् । पानी परेको छ तर पनि स्थानीयहरु पानीमा भिज्दै घरबाहिर निस्केका छन् । घरभित्र गएर बस्दा कतिबेला पहिरोले पुर्ने हो सारै डर लागिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।